I-Harbour View Room yabakhenkethi | Hamba ngeFerry
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguWindseeker
I-Harbour View Tourist Room inamagumbi amabini. Ibhloko enye ukusuka edolophini yeBayfield kwaye ijonge izibuko laseBayfield kunye neSiqithi saseMadeline. Hlala kwidesika kwaye ukonwabele ukuphuma kwelanga kunye nenyanga ngaphezulu kweSiqithi saseMadeline njengoko uphumla ngelixa untywila kwiLake Superior kunye neZiqithi zePostile. Lonke umtsalane wedolophu yaseBayfield kukumanyathelo nje akude- ikofu, iigalari zobugcisa, i-ayisikrimu, iivenkile kunye nokutya okumnandi.
Ijonge idolophu enomtsalane esemantla yeBayfield, WI. Hamba uye kwisikhitshane, ikofu, ukuya kuthenga, ukutya okulungileyo nokunye, emva koko ubuyele kwindawo yakho egqunyiweyo yechibi kwaye uphumle.
4.38 · Izimvo eziyi-32
Umbuki zindwendwe ngu- Windseeker
I-Windseeker Rentals ilawula le yunithi, nangona kunjalo umnini uhlala kwiyunithi esecaleni. Usenokuba uphumile esebenza eyadini kodwa uya kwenza konke okusemandleni akhe ukukunika indawo yakho nokuba ngasese.